Baahin: Axad, Apr 17, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Warbixin ku saabsan weeraro & qaraxyo shalay iyo maanta lagu qaaday masaajidda Galkacyo; 5 qof oo dhimasho ah, 12 dhaawac ah; waraysiyo ayaan la yeelanay indheergaradka & madaxda gobolka Mudug … Sh. Mursal Mire Maxamed oo ka mid ah culimada gobolka Mudug oo aan ka waraysanay waxa ay diintu ka qabto weeararada masaajidda & dilalka culimada … “Dilka culimada iyo weerarrada masaajiddu waa masiibo ugub ah oo ku soo korartay deegaanada Puntland” Gen. Yuusuf Axmed Khayr … Warbixin ku saabsan Issimo safar ku tagey deegaano ka mid ha gobollada Karkaar & Haylaan … – Radio Daljir
Baahin: Axad, Apr 17, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Warbixin ku saabsan weeraro & qaraxyo shalay iyo maanta lagu qaaday masaajidda Galkacyo; 5 qof oo dhimasho ah, 12 dhaawac ah; waraysiyo ayaan la yeelanay indheergaradka & madaxda gobolka Mudug … Sh. Mursal Mire Maxamed oo ka mid ah culimada gobolka Mudug oo aan ka waraysanay waxa ay diintu ka qabto weeararada masaajidda & dilalka culimada … “Dilka culimada iyo weerarrada masaajiddu waa masiibo ugub ah oo ku soo korartay deegaanada Puntland” Gen. Yuusuf Axmed Khayr … Warbixin ku saabsan Issimo safar ku tagey deegaano ka mid ha gobollada Karkaar & Haylaan …